Adeegyada Sawirrada gudaha Mareykanka
Baahinta wararka ugu caansan ee ay daabacaan suuqa. Waxaa loo adeegsadaa qaab furan iyo khiyaano, ganacsi, tamar iyo bey'ad, madaddaalada guriga iyo isboortiga, siyaasadda guud iyo xiisaha.
Waxa daabacay jenny davis
arag Adeegyada Sawirrada la daabacay 4 years ago
Sawir qaadistu waa sayniska, farshaxanka, dalbashada iyo ku celcelinta abuurista sawirro waara iyadoo la duubayo nal ama shucaac kale oo elektaroonig ah, ha ahaato mid elektiroonig ahaan loo adeegsado aaladda sawir qaade, ama kimiko ahaan iyada oo loo adeegsanayo qalab iftiin leh sida filim sawir ah.  Caadi ahaan, muraayad ayaa loo istcimaalaa iftiinka ka muuqda ifka ama ka soo jeeda walxaha galay muuqaal dhab ah dusha iftiinka leh ee gudaha kamarada inta lagu gudajiro waqtiga. Iyada oo leh qalabka sawirka elektiroonigga ah, tani waxay soo saartaa lacag koronto ah pixel kasta, oo elektiroonik ahaan loo farsameeyo oo lagu keydiyo faylka muuqaalka dhijitaalka ah si loo soo bandhigo ama loo socodsiinayo. Natiijooyinka emulsion sawir waa muuqaal qarsoon oo qarsoon, kaas oo markii dambe kimikal ahaan "u horumarey" muuqaal muuqda, ha ahaato mid taban ama togan oo ku xidhan ujeeddada qalab sawir iyo habka loo adeegsado. Muuqaal xun oo ku saabsan filimka ayaa caado ahaan loo isticmaalaa in sawir ahaan looga sameeyo sawir wanaagsan oo ku saleysan xaashi warqad, loo yaqaan daabacaad, ama iyadoo la adeegsanayo kobcinta ama xiriirinta daabacaadda. Sawir qaadista waxaa laga shaqeeyaa dhinacyo badan oo saynis ah, waxsoosaar (sida, photolithography), iyo ganacsi, iyo sidoo kale adeegsiga tooska ah ee farshaxanka, filimka iyo soosaarka fiidiyowga, ujeeddooyinka madadaalada, hiwaayadda, iyo wada xiriirka guud.